Tababarrada Ugu Fiican: Sida Loo Adeegsado Iyo Waxa Ay Tahay Inaad Ogaato | Eeyaha Adduunka
Susana godoy | 22/09/2021 15:39 | Qalabka eyga, Tababar
Suunka tababarka waa cunsur kale oo ay tahay inaan sidoo kale aad ugu dhowaanno. Laakiin in kasta oo ay u ekaan karto xoogaa kadis ah, waa run inay tahay mid ka mid ah aaladaha la jecel yahay maxaa yeelay waxay aasaasi doontaa xiriir aan hadal ahayn oo u dhexeeya milkiilaha iyo xayawaankiisa. Sidaa darteed, waa inaad sidoo kale fiiro gaar ah u yeelataa dhaqdhaqaaq kasta.
Laakiin waa wax aan gadaal arki doonno oo sidaas oo kale ah, waxay naga caawin doontaa inaan waxyar ka sii fahamno shaqooyinka aasaasiga ah ee sheygaas. Oo leh suunka tababarka waxaan hubinaa in xoolahayaga mar walba la ilaaliyoSidaa darteed, waa inaan had iyo jeer u dooranaa kan ugu wanaagsan iyaga.
1 Waa maxay xarigga tababarka eyga
2 Intee in le'eg ayay suunka tababarka noqon doonaa?
3 Sida loo isticmaalo xarig tababar si loo tababaro eyga
4 Goorma ayay tahay inaan bilowno isticmaalka suunka tababarka?
5 Halkee laga iibsan karaa xadhigga tababarka eeyga
Waa maxay xarigga tababarka eyga
Ujeeddada xarigga tababarka eey waa in la baro xayawaankaaga. Laakiin waxay sidoo kale diiradda saareysaa xakamaynta iyaga, gaar ahaan markaad u baxdo socod ama laga yaabee inta lagu jiro jimicsiga. Sidaa darteed, waxaan aragnaa inay haysato jillaab ay ku qabato qaybta qoorta eyga dabadeedna si fiican u dhammayso dhammaadka kale oo aan ku qaadi karno dhibaato la'aan.
Haddaba, si guud markaan u hadalno, waxaan oran karnaa taas isticmaalkeedu wuxuu ku wajahan yahay hagaajinta habdhaqanka xayawaankayaga, iyo sidoo kale ammaankooda.
Intee in le'eg ayay suunka tababarka noqon doonaa?
Ma aha su’aal aan si qumman uga jawaabi karno. Waayo? Waa hagaag, maxaa yeelay wax walba waxay ku xirnaan doonaan xajmiga eyga gaar ahaan. Waxaan ula jeedaa, inaan bilaabo waxaad u baahan tahay inaad ogaato miisaanka iyo cabbirka iyo xitaa dhererka dhogortaada. Sidan ayaad durba u heli kartaa fikrad ah waxa uu u baahan yahay, maxaa yeelay dhammaan eeyaha isku mid ma ahan, cabbir ahaan iyo dabeecad ahaanba.
Sidaa darteed, waa in la sheegaa in eygu u baahan yahay inuu si xor ah u dhaqaaqo laakiin sidoo kale, naga tag raaxo, markaa dhererka ugu yar waa inuu ahaadaa qiyaastii 5 mitir, kuwaas oo ah waxa loogu yeero halbeegga. Waxaa muhiim ah in haddii eeygaagu yar yahay inuusan dhaafin dhererkan oo xusuusnow inay had iyo jeer la doorbidi karo inuu yara yara caato. Halka in haddii eeygu qiyaastii yahay 20 kiilo, markaa waxaad u baahan tahay xarig dhumuc weyn maxaa yeelay waxaan u baahan doonnaa iska caabin dheeraad ah laakiin dherer ilaa 3 mitir ah ayaa nagu filan.
Ku noqoshada eeyaha dhexdhexaadka ah ama kuwa yaryar, waxaan ognahay inay u badan yihiin kuwo aan samir lahayn, oo ay jecel yihiin inay uriyaan oo ku ciyaaraan tallaabo kasta, marka waxaa wanaagsan inaad sharad ku gasho mid la fidin karo. Halka kuwa aad wax badan ugu jiidaya xarigga, had iyo jeer waxaa wanaagsan in lagu xiro iyaga oo gaaban. Sidaa darteed iska ilaali jugta qaarkood markaan taxaddar lahayn. Eeyaha waaweyn, ee raadraaca ama inaad u lugayso meel cidlo ah, inkasta oo aanay ahayn kuwa ugu habboon, waxaad isticmaali kartaa suumanka in ka badan 20 mitir oo ah kuwa dheeraadka ah.
Sida loo isticmaalo xarig tababar si loo tababaro eyga
Sida dhammaan wejiyada nolosha, xarigga tababarku wuxuu kaloo u baahan yahay tilmaamo si xoolaheennu ula qabsadaan.
Marka hore, waxaa ugu wanaagsan in xarigga la dhigo meel xiran sida gurigayaga oo loo oggolaado inuu ku socdo.
Ha ku jiidin, laakiin waxaa u fiican xayawaanka inuu aado wicitaannadaada iyo xarigga si uu u barto.
Markaad banaanka joogto, waa inaad mar walba hagtaa si uu u sameeyo meesha aad tiraahdo, laakiin iska ilaali jiidashada aan soo sheegnay.
Dhammaan tillaabooyinka uu si fiican u sameeyo, waa inaad ammaantaa, halka haddii uu ku jeesjeesayo ama uu ka soo horjeedo, waxaan ka fogaan doonnaa inaan u dhowaanno oo aan koolkoolinno si uu u fahmo inaysan wax sax ahayn.
Marka xadhiggu cidhiidhi yahay eeygu jiidayo, istaag oo sii wad markaad aragto si aad u dabacsan.
Waa inaan nahay ku bilaw socodka lugta gaaban oo haddii xayawaankeenu uusan jugleyn, markaa waxaan dabcin karnaa wax yar oo xadhig ah. Waa hab aad mar walba gacanta ugu jirto.
Haddii eeygaagu bilaabo inuu calaliyo xadhigga, markaa waxa fiican inaad iska tuurto adiga oo beddelaya koorsada ama u jeedinaya. Waxaad dareemi doontaa in wax isbedelaan marka aad tilmaantaas samaynayso.
In lagu abaal mariyo abaalmarino mar kasta oo uu wax fiican sameeyo sida inuu dhinaceena socdo oo uu joojiyo abaal -marin la’aan marka uu xarigga jiidayo, waa qodobbada kale ee ugu badan ee la fuliyo.
Goorma ayay tahay inaan bilowno isticmaalka suunka tababarka?
Tani waxay sidoo kale ku dhacdaa nolosheena sidaas darteed, tan xayawaanka guriga, lagama tagi karo. Runtu waxay tahay in sida ugu dhakhsaha badan aad u bilowdo, si ka fiican. Sababtoo ah waxaad sidoo kale arki doontaa natiijooyinkaas oo aad hore u filaysay. Markaa, tan waxaan kugula talineynaa haddii aad haysato ilmo leh dhowr bilood, inaad ku bilowdo tababarka.
Waa run inaad guriga ku samayn doonto, isaga oo suunka garanaya, iwm. Laakiin inyar, waxaad sidoo kale ku dabaqi doontaa markaad joogto waddada iyo amarada aan hore u soo sheegnay. Waxaad u baahan tahay dulqaad badan, dhowr abaalmarino ama abaalmarino iyo waqti aad ku hesho. Laakiin weli, way ka fududdahay haddii aad bilowdo marka xayawaanku qaangaar yahay.
Halkee laga iibsan karaa xadhigga tababarka eeyga
Mid ka mid ah qodobbada ugu wanaagsan ee Amazon waa marka aad gasho degelkooda, waxaad ku raaxeysan kartaa a fursado badan. Taas macnaheedu waa in suumanka tababarka dhammaantood ay halkaas joogi doonaan. Laga soo bilaabo dhammaadkeeda halabuurka, ilaa midabyo aad u badan ama ka yar, dherer kala duwan iyo dabcan, qiimayaal kala duwan. Taasoo macnaheedu yahay inaad mar walba dooran karto midka adiga iyo eygaaga kugu habboon.
Ma uusan seegi karin ballanta Kiwoko maxaa yeelay sidoo kale waa mid kale oo ka mid ah bakhaarradan oo na siiya wax kasta oo aan uga baahanno xayawaankayaga. Xaaladdan, waxaad yeelan doontaa xargaha ugu fiican, laga bilaabo kan ugu gaaban ilaa kan la fidin karo iyada oo la mariyo caagad ama gacanta. Adduun dhan oo kaamil ah si eygayaga loogu tababaro hab raaxo leh.
Labada xargo ee nylon, oo ah kuwa ugu badan, iyo maqaar dufan leh, sidoo kale waxay ahaan doontaa Tíanimal. Laakiin ma aha kala duwanaanshaheeda awgeed waa lagugula talinayaa, laakiin sidoo kale sababtoo ah waxaad ku yeelan doontaa midabbo kala duwan iyo qiimayaal aad u jaban, oo ay ka mid yihiin had iyo jeer dalab aan caadi ahayn. Hadda waa waqtigii laga faa'iideysan lahaa!
Wadada buuxda ee maqaalka: Dunida eyga » Eeyaha Guud » Tababar » Suunka tababarka
Dhalada biyaha eey